Lauren RAJAOBELINA · Febroary 2013 · Global Voices teny Malagasy
Lauren RAJAOBELINA · Febroary, 2013
Lahatsoratra farany an'i Lauren RAJAOBELINA tamin'ny Febroary, 2013
Mediam-bahoaka 08 Febroary 2013
Nilatsaka nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana Janoary ny orana ary nandrava ny afovoany sy ny ilany atsimon'ny firenena, tany Mozambika. An'aliny ny olona nafindra toerana ary 45 no maty araka ny tatitra. Raha mbola mitombo ny trà-boina sy ny faharavàna, dia niantso firaisankina sy naneho ny hatezerany manoloana ny halatra sy ny fandrobàna misy ny vondron'ny mpiserasera amin'ny aterineto.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 03 Febroary 2013
Nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina tao am-ponja ilay mpikatroka mafàna fo tsy manana zom-pirenena Abdulhakim AlFahdi, ny 16 Janoary teo, rehefa nandray ny saziny roa taona an-tranomaizina. Nampangain'ny fitsarana fa namely mpitandro filaminana iray tamin'ny hetsi-panoherana natao tamin'ny volana Marsa teo ity mafàna fo ity. Nolazain'ilay mpikatroka mafàna fo fa noforonina mba hiampangàna azy ity fanenjehana ity noho ny hafanam-pony ara-politika amin'ny fangatahana ny zon'ny vondrom-piarahamonin'ireo tsy manana zom-pirenena any Koety